Taageerayaasha Kulmiye oo sameeyay dibedbax - BBC Somali
Taageerayaasha Kulmiye oo sameeyay dibedbax
Image caption Taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee Kulmiye
Magaalada Hargeysa waxaa maanta ka dhacey dibadbax balaaran oo ay dhigayeen xisbiga mucaaradka ee KULMIYE, kaas oo qeyb ka ah ololaha doorashada madaxtinimada ee Somaliland.
Dibedbaxa Kulmiye oo maanta ahaa kii ugu danbeeyay ee xisbiga ka hor inta aan loo dareerin doorashada maalinta Sabtida ee 26-ka bishan June, ayaa waxa taageerayaashu isugu soo baxeen fagaaraha Xoriyadda ee magaalada Hargeysa.
Taageerayaasha xisbiga Kulmiye ayaa waxa dibed baxa kula hadlay hogaamiyaha xisbiga Kulmiye Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo ka hadlay waxyaabaha xisbigiisu balanqaadayo haddii loo doorto madaxtinimada.
Axmed Siilaanyo waxa uu sheegay in xisbigiisu wax ka qaban doono shaqo la'aanta heysata dhalinyarad Somaliland, korna u qaadi doono heerka waxbarashada iyo adeegyada kale ee bulshada.
Ololaha doorashada Somaliland oo maalinba uu xisbi leeyahay ayaa waxa ugu danbeysa maalinta beri ah oo ay leeyihiin taageerayaasha xisbiga UCID.